Iwaini inogadzirwa uchishandisa anonoita kutora pane 'ripasso' maitiro. Mazhinji mazambiringa anozadzwa panguva yekukohwa, nepo mamwe ese ari padivi kuti aome. MunaJanuary, waini yacho yakasanganiswa neiyo muto kubva pamazambiringa akaomeswa inodururwa rwechipiri.
Munda uyu wemizambiringa wakakomberedza Villa della Torre, hunyanzvi hwakajeka hweRenaissance aratidziro ikozvino iri yemhuri, uye inoburitsa waini izere newaini ine simba yekukwegura inogona kusvika makore gumi. Iko kusanganisa ndiko kusanganisa kwenhoroondo yeClvina naRondinella pamwe nekuwedzerwa kwevashoma huwandu hweSangiovese.
Iwaini iyi yakadzika ruby ​​tsvuku uye nyore nyore mairi ane akasiyana eItaly zvidyiro, pamusoro pese risottos, kunyanya ayo akaravira nesafron, porcini howa uye nyama yenguruve; zvemhando yepamusoro senge pasta neAmatriciana neCarbonara sauces, yakabikwa lasagna, gnocchi ine gorgonzola chizi uye walnuts; nyama dzakabikwa uye dzakagochwa.